Showing १४१-१५० of १,०९९ items.
धरान । भारत र चीनको दशगजा क्षेत्रमा सोमबार र मंगलबार भएको दुई पक्षीय भिडन्तमा भारतका २० सैनिक शहीद भएको बताइएको छ । पूर्वी लद्दाखको गैलवान क्षेत्रमा चीनका सेनासँग भएको झडपका क्रममा भारतका २० जना सैनिक जवान शहीद बनेको सैनिक कर्णेलले बताएको उल्लेख गरिएको छ । मंगलबार पनि दुई जना सैनिक जवान शहीद बनेका छन् । समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार चीनतर्फका ४३ जवानको ज्यान गएको बताइएको छ तर हालसम्म चीनले आधिकारिक पुष्टि गर्ने गरी कुनै भनाइ सार्वजनिक गरेको छैन । झडपमा थुप्रै जवानहरू हताहत भएको अनुमान गरिएको छ । भारतका तर्फबाट शहीद हुनेमा एक कर्णेल पनि रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । दुई पक्ष
चीन र भारतीय सेनाविच भिडन्त, तीन भारतीय सैनिकको मृत्यु
धरान / भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच लद्दाखको विकट गलवान उपत्यकामा भीडन्त भएको भारत सरकारले पुष्टि गरेको छ। भारत सेनाले ुदुवै पक्षका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरू स्थिति सामान्य बनाउन वार्तामा रहेको बताउँदै दुवैतर्फ सैनिकको मृत्यु भएको जनाएको छ। चीनले भारतलाई तनाव बढ्ने गरी एकपक्षीय रूपमा कुनै काम नगर्न आह्वान गरेको समाचारसंस्था रोएटर्सले जनाएको छ। यता समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार चीनले भारतलाई सीमा उल्लङ्घन गरेर चिनियाँ सैनिकमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार भारतीय सेनाले भारत चीन सीमामा सोमवार राति भिडन्त हुँदा एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी र दुई सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेक
प्रकाशित मितिः असार २, २०७७
आहा ! मनाङ (एउटा यात्रा दृष्य)
भारतमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा नयाँ फड्काेः संक्रमित र कोरोना मुक्त हुने बराबरी
धरान । भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुने र उपचार भएर ठीक हुनेको संख्या बराबरीको स्थितिमा पुगेको छ । भारतमा कोरोनाको कारणले हालसम्म ७ हजार ७५० जना मृत्यु भइसकेका छन् । तर उपचारपछि ठीक हुनेको संख्या र संक्रमितको संख्या बराबरीको स्थितिमा पुगेको हो । कोभिड १९ इण्डिया डट ओराजीका अनुसार २ लाख ७६ हजार ७७९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जबकि १ लाख ३४ हजार ६६९ जना उपचारपछि ठीक भएर घर फर्किसकेका छन् । भारतमा हाल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ३४ हजार ३४५ जना छन् । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढे पनि उपचारपछि निको भएर घर फर्किनेको संख्याले गर्दा उपचारमा नयाँ क्रान्ति गर्न सफल भएको छ
प्रकाशित मितिः जेठ २८, २०७७
लक्षण विनाका कोरोना संक्रमितबाट महामारी फैलिएको छैनः डव्लुएचओ
सुनसरी / विश्व स्वास्थ्य संगठन (डल्वुएचओ) ले कोभिड १९ भाइसरको विना लक्षण (एसिम्टोमेटिक) को संक्रमित विरामीबाट दोश्रो व्यक्तिलाई विरलै सर्नें जनाएको छ । डव्लुएचओकाअनुसार यसअघि पाएको तथ्याङ्कको आधारमा लक्षण विहिन कोरोना संक्रमतिबाट अरुलाई कमै संक्रमित हुने गरेको छ । पछिल्लो केही समययता शोधकर्ताहरुले एसिम्टोमेटिक विरामीप्रति शंका व्यक्त गदैै आएका छन् । कोरोनाको एसिम्टोमेटिक विमारीको उपचारमा चिन्ता व्यक्त गरको थियो । महामारीको प्रारम्भमा कोरोना भाइसर संक्रमितबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गरेको प्रमाण प्राप्त भएको थियो । भलै ती संक्रमितमा लक्षण देखियोस वा नदेखियोस । डल्लुएचओका महामारी विषेशज्ञ ड
प्रकाशित मितिः जेठ २७, २०७७
एजेन्सी / न्यूजील्यान्डमा सोमवार मध्यरातदेखि कोरोनाभाइरससम्बन्धी सतर्कता तह सबभन्दा तल्लो तहमा पुर्‍याइने प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले घोषणा गरेकी छन्। त्यसको अर्थ मुलुकभित्र लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुनेछन्। तर सीमा नाका भने अझ पनि बन्द रहने बताइएको छ। सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरू, खुद्रा पसलहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू, सार्वजनिक यातायातका माध्यमहरू र घरेलु उडानहरूलाई कुनै प्रतिबन्ध बिना चलाउन दिइनेछ। 'जील्यान्डले भाइरस जित्न अभूतपूर्व रूपमा एकताबद्ध भएर काम गर्‍यो '-आर्डर्नले भनिन्। भाइरसको आर्थिक प्रभावले अर्बौँ मानिस थलिनेतर भाइरस निर्मूल नहुने त्यसैले निरन्तरको
एजेन्सी / अमेरिकाभरि शनिवार पनि जातीय विभेद र प्रहरी क्रूरताविरुद्धको प्रदर्शन जारी रहेको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अश्वेत पुरुष जोर्ज फ्लोइडको मृत्युपछि सुरु भएको प्रदर्शन जारी रहेको हो । जातीय विभेदविरुद्धको प्रदर्शन विश्वका अन्य भागमा पनि फैलिएको छ। यूके र अस्ट्रेलियामा कोरोनाभाइरसका जोखिम रहँदा रहँदै पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। अमेरिकाको राजधानी वाशिङ्टनमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्रदर्शनमा दशौँ हजार मानिसहरू सहभागी भएका छन्। प्रहरीले अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस पुग्ने सबै बाटोहरू बन्द गरेको छ। वाशिङ्टनमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहर
युएईमा समस्या परेका नेपालीलाई सेञ्चुरी बैंकद्वारा राहत
धरान । कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत युएईमा रहेका नेपालीहरूलाई सेञ्चुरी बैंकको सेञ्चुरी रेमिटले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । युएईमा कार्यरत रहेका नेपालीहरूलाई सेञ्चुरी बैंकका युएई प्रमुख प्रकाश पौडेलले ३ सय केजी चामल र ५४ लिटर तेल उपलब्ध गराएको हो । गत आइतबार रेमिटमा कार्यरत कृष्ण गौतम, दूर्योधन कार्की, महेश श्रेष्ठलगायतले सामग्री उपलब्ध गराएका थिए । बैंकले गैर आवासीय नेपाली संघ (नेपाल एशोसिएसन) युएईको राहत वितरण टोलीलाई एक हजार दिरहाम बराबरको राहत सामग्री प्रदान गरेको छ । टोलीलाई २ सय केजी चामल, १ सय केजी आलु , १ सय केजी प्याज, ५५ लिटर तेल प्रदान गरिएको बैंकका युएई प्रमुख प्रकाश पौडे
बीजेपीले दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारीलाई हटायो
धरान । कोरोना महामारीका बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारीलाई पदमुक्त गरिएको छ । अध्यक्ष तिवारीलाई हटाएर उनको स्थानमा आदेशकुमार गुप्तालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बीजेपीले तिवारीलाई सन् २०१६ मा प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । अध्यक्ष पद प्राप्त गरेका गुप्ता एनडीएमसीका पूर्व मेयर हुन् । हाल उनी वेस्ट पटेल नगरका पार्षद् हुन् । गएको फेब्रुअरीमा भएको विधानसभाको चुनावमा बीजेपीले नराम्रो हार बेहोरेको थियो । उक्त चुनावमा आम आदमी पार्टीले बीजेपीलाई ७ सिटमा सीमित गरिदिएको थियो । ७० सिट भएको दिल्लीमा ६३ सिटमा आम आदमी पार्टीले जितेको थियो ।